VaRamaphosa Vanonyaradza Mhuri yaVaimbova Meya weJohannesburg, VaJolidee Matongo
Gunyana 20, 2021
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vatumira mashoko enyaradzo kumhuri, hama, shamwari nevagari veguta reJohannesburg, vachichema vaimbova meya weguta reJohannesburg, VaJolidee Matongo, avo vakafa mutsaona yemotikari nemusi weMugovera.
Mumashoko avo enyaradzo, VaRamaphosa vati zvinorwadza kunzwisisa chiitiko ichi, zvikuru kana vakatarisa kushanda kwaiitwa naVaMatongo, uye kudyidzana kwavaiita naivo VaRamaphosa, nevagari vemuSoweto.
VaMatongo, avo vana baba mubereki vakaberekerwa muZimbabwe, vange vave nemakore makumi mana nematanhatu.Vakashaya vachibva kuSoweto kunokurudzira vatsigiri vebato ravo, reAfrican National Congress, kuti vanonyoresa kuvhota.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachidzidzisa paTswane University of Technology, muPretoria, Muzvinafundo Ricky Mukonza, vanoti kunyange hazvo vamwe vanhu vachifungira kuti VaMatongo vakaurawa nevamwe vavo vezvematongerwo enyika, sekuvona kwavo, iyi itsaona isingaratidzi kuti pane chikiribidi chakaitwa.
Hurukuro naMuzvinafundo Ricky Mukonza